Izibalo Zokumaketha Nge-imeyili Okufanele Uzazi | Martech Zone
Angiqiniseki kakhulu ukuthi zonke izibalo zokumaketha ze-imeyili lapha zibalulekile ekumaketheni kwakho kwe-imeyili, kepha ezimbalwa zazo zigqama kimi:
Imali engenayo yokukhangisa nge-imeyili iphansi ngokumangazayo futhi ayisetshenziswa kakhulu. Ngimangele njalo kubhulogi lethu ukuthi isikhangiso sikanhlokweni siyathengisa njalo… kepha akekho othengile ukukhangisa ephephandabeni lethu lansuku zonke nelamasonto onke lokho kufinyelela kwababhalisile abangaphezu kwama-75,000 njalo ngesonto.
Ukwamukelwa Nge-imeyili isiphezulu, ngabathengi abangama-95% bahlola i-imeyili yabo okungenani kanye ngosuku! Uma ungathumeli imiyalezo efike ngesikhathi yokutholwa, ukugcinwa kanye namasu we-upsell wamathemba akho namakhasimende… uphuthelwa!
Ukusetshenziswa Kwe-imeyili Yeselula futhi kuyanda! Ama-64% wabathathi izinqumo bafunda ama-imeyili ngamadivayisi eselula. Ngabe ama-imeyili akho ayasabela kumadivayisi eselula futhi afundeka kalula? Ngisashaqekile ukuthi mangaki ama-brand key angithumelela ama-imeyili engingakwazi ukuwafunda kuselula yami. Izikhathi eziningi ngimatasa kangangoba ngiyazisusa esikhundleni sokulinda ngize ngibuyele kudeskithophu ukuze ngizifunde.
Mhlawumbe imethrikhi ebaluleke kunazo zonke ukuthi kuwo wonke ama- $ 1 asetshenziswe kumasu wokumaketha nge-imeyili, $ 44.25 yimbuyiselo emaphakathi ekutshalweni kwe-imeyili kokuthengisa. Lokho kuyimbuyiselo yotshalo-mali engenakunqobeka ngezinye iziteshi namasu wokumaketha.
I-infographic ngo I-Visualistan.
Tags: ukwakheka kwe-imeyiliimeyili Marketingizibalo zokuthengisa nge-imeyiliukufundwa kwe-imeyiliizibalo ze-imeyilii-imeyili ephathekayoi-imeyili ephendulayo yeselulai-imeyili ephendulayo
Isiginali: Khula nge-imeyili, umbhalo, ezenhlalo kanye nama-Sweepstakes